शरिर अपाङ्ग भएकाे हाे, मेराे कदम चाल्ने हाैसला हाेइन ! | Butwal Dainik
शरिर अपाङ्ग भएकाे हाे, मेराे कदम चाल्ने हाैसला हाेइन !
२०७७ भाद्र ८, सोमबार (१ साल अघि)
इलाम, भदाै ८ : देउमाई नगरपालिका–२ स्थित मङ्गलबारेकी सुमला साङपाङ राईमाथि पाँच वर्षकै उमेरमा ‘बज्रपात’ भयो । घरम हिँड्दै गर्दा लडेर सुमलाको कम्मरमुनिको भाग चल्न छोड्यो । सुमलालाई उपचारका लागि नेपाला मात्र नभई भारतका अस्पतालसम्म पुर्याइयो तर व्यथा ‘बीसको उन्नाइस’ भएन । त्यतिमा मात्र उनको पीडा रोकिएन । सुमलाले सानैमा बुबासमेत गुमाउनु पर्यो । यस्ता अनेकौँ समस्याबीच सुमला अहिले १६ वर्ष पुगिन् । उनी शारीरिकरूपमा अस्वस्थ भएपनि पढाइमा अब्बल छिन् अनि प्रतिभाशाली छिन् ।
माई नगरपालिका–९ स्थित चिसापानीका अरुण गौतम जन्मजात अपाङ्गता भएका बालक हुन् । एघार वर्षीय अरुण पनि चित्रकलाका सौखिन हुन् । उनलाई पनि चित्र बनाएर बच्ने र पैसा कमाउने इच्छा छ । “सानै छ तर पनि चित्र राम्रै बनाउँछ”, अरुणका बुबा लक्ष्मणले भने, “यही कला देखेर एक जनाले पढाउन काठमाडौँ लान्छु पनि भन्नुभयो तर अलि अशक्त भएकाले दिइन ।” लक्ष्मणलाई छोरा अशक्त भए पनि चित्र कोरेरै जीवन धान्छ भन्ने लागेको छ । अवसर मिले चित्रकलाको राम्रै विद्यालयमा पढाउने समेत योजना छ बुबा लक्ष्मणको ।
एक पट्टिको हात र खुट्टा अशक्त भएकाले विद्यालय जान अरुणलाई केही समस्या छ । तर दुःखले हिड्न भने समस्या छैन । “पहिले त भविष्यमा दुःख पाउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो तर चित्र बनाएरै खान्छ जस्तो लाग्न थालेको छ अहिले, त्यसैले अब ढुक्क छु”, लक्ष्मण भन्छन्, “चित्रकलाका धेरै प्रतियोगितामा भिड्न जान्छ, स्कुलमा पनि भाग लिने गरेको छ ।”
त्यस्तै इलाम नगरपालिका–७ बस्ने आलोक खतिवडा र भुपाल खतिवडाको पनि कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । यी दुवै दाजुभाइलाई हिड्नका लागि साहारा नभइ हुँदैन । शारीरिक रूपमा अशक्त भएपनि आलोक र भुपालको सोच भने निकै दरिलो छ । दुवै भाई पढाइमा अब्बल छन् त्यसैले उनीहरु दुवैको भविष्यमा ठूलो मान्छे बन्ने सोच छ । अहिले भुपाल स्नातक अध्ययन गर्दै छन् भने भाइ आलोक १२ कक्षामा । “हिड्न त कि मान्छेको कि ह्वील चियरको सहारा चाहिन्छ तर बसेर गर्ने काम गर्न गाह्रो छैन”, भुपाल भन्छन्, “पढाइमा त कहिल्यै फेल भइन, अहिले पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ ।” भुपाल मात्र होइन ओलोक पनि कक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीमा पर्छन् । “अरू केही गरिन्छ भन्ने त लाग्दैन, पढेर चाहिँ राम्रै मान्छे बन्ने सोच छ”, आलोक भन्छन्, “सबैले राम्रो छ पढाइ भन्नुहुन्छ ।”
सुमला, अरुण, आलोक र भुपाल त उदाहरण मात्रै हुन् । अपाङ्गता भए पनि फरक क्षमताका कारण अब्बल ठहरिएका यसता प्रतिभाहरु जिल्लामा धेरै छन् । अपाङ्गता भएका बालबच्चालाई हेला नगरी उनीहरूको क्षमता चिन्न सक्दा अब्बल दर्जाको नागरिक बन्नसक्ने अपाङ्गता एकता समाजका इलामका सचिव प्रकाश चापागाईं बताउँछन् । “समाजमा अझै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टि नकारात्मक छ, यो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ, किनभनने अवसर दिए गरेर देखाउन उनीहरु सबै मानिसजस्तै सफल हुनेछन् ”चापागाईंले बताए ।
पछिल्लो समय सरकार र सङ्घसंस्थाले अपाङ्गमैत्री काम गरेका कारण अपाङ्गता रहेका व्यक्तिलाई जीवन जिउन सहज हुँदै आएको छ । उनीहरूलाई आवश्यक सामग्री र भत्ता दिन थालेपछि परिवारमा रहन सहज भएको अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्दैै रहेको संस्था करुणा फाउण्डेसनका छवि श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
करुणले अपाङ्गता भएकाहरुलाई कष्टकर हुने खालको आवासीय संरचना समेत सुधार गरिदिएको छ । करिब ८७ जना अपाङ्गता भएकाको आवासीय संरचना सुधार गरिएको छ । रु १० हजार सम्मको लगानीमा घर, सौचालय र बाटोको संरचना सुधार गरिएको करुणा फाउन्डेसनका छवि श्रेष्ठले बताए । अपाङ्गताका कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकालाई साक्षर बनाउने उद्देश्यले घरैमा अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था पनि गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति अझै पनि समाजमा खुल्न नसक्दा अपाङ्गतासम्बन्धी जानकारी लिन सकस पर्ने गरेको छ । समाजकै डरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पीडा लुकाउनाले परिचय पत्र समेत नलिने गरेका छन् । समाजमा अपाङ्गता हुनु पूर्वजन्मको पाप भन्ने तथा समाजबाट परम्परागत सोच हाबी हुनु वा परिवारले परिचय पत्र बनाउँदा अंश दिनुपर्ने धारणाले पनि अपाङ्गता भए पनि नखुलेको करुणाका छवि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“कतिपयले नागरिकता नै बनाएका हुदैनन् । नागरिकता बनाउँदा परिवारकै सदस्यले अंश दिनुपर्ने वा आफू समेत अपहेलित हुने डरले बनाउन नदिने गरेका छन्” श्रेष्ठले भने, “त्यसै पनि यस्ता व्यक्ति परिवारले बोझ भएको ठान्छन् । त्यसमाथि पनि परिचय पत्र दिलाउदा अधिकारसमेत दिनुपर्दा नबनाउनु नै ठिक भन्ने ठान्छन् ।” उनका अनुसार करुणा फाउन्डेसन र स्थानीय सरकारलेसमेत पहल गर्दासमेत कतिपयले परिचय पत्र नबनाउने गरेको पाइएको छ ।
यता अपाङ्गता समाज इलामका सचिव प्रकाश चापागाईं भने त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजबाट बाहिर ल्याउन नै नसकिने बताउँछन् । उनीहरूलाई बाहिर ल्याउँदा पनि परिवारले अपहेलना गर्ने हुँदा ल्याउन नसकिएको चापागाई बताउँछन् ।
#सुमला साङपाङ राई